के बिष्णुले नारायण माथि ‘जोबान’ सुम्पिन खोजेको हो त ? भिडियो सहित ! – Complete Nepali News Portal
के बिष्णुले नारायण माथि ‘जोबान’ सुम्पिन खोजेको हो त ? भिडियो सहित !
ScotNepal August 12, 2019
तिज हिन्दु नेपाली नारीहरुको महान चाडको रुपमा NSS सांस्कृतिक कला संगठन नेपाल कि सदस्य बिष्णु श्रीपालिको सुमधुर स्वरमा अएकाे छ। बिशेषत १ बर्षभरी काम गर्दा थकान महसुस गरेका हिन्दू महिलाहरु आफुले भोगेको दुख पिरलाई भुलेर माइती गाउँमा गएर रमाईलो गर्ने र मनको बह पोख्ने गर्दछन । यसै क्रममा पछील्लो समयमा लोक संगितको बजारमा ब्यस्त गायक नारायण बि.पी परियार र बिष्णु श्रीपालिको सुमधुर स्वरमा मौलिक तिज गीत ‘जोबान’ सार्वजनिक भएको छ ।
बिष्णु श्रिपालीको एलबमको रुपमा बजारमा भित्रिएको उक्त गीतले नेपाली लोक पारखी मनहरुको मन जित्ने गायक गायिकाको आशा रहेको छ ।
तिजमा चेली घर छोडि माइत जादाँ आउने अनेकम समस्याहरुलाई गीतमा प्रस्तुत गरेर थप मौलिकता एबम सकसलाई उठ्ठान गरिएको छ । तिज भित्रिए लगतै नेपाली बजारमा तिज गीत पनि प्रसस्तै भित्रने गर्दछन तर कमै गीत दर्शक तथा श्रोताको मनमा पर्दछन हो त्यस्लाई मध्यनजर गर्दै ‘जोबान’ तिजी कोसेली मार्फत समस्त नेपाली समुदायको मन र मस्तिष्कमा बसाल्ने प्रयास स्वरुप यो कोसेलीलाई बजारमा ल्याएको गायक , गायिकाले सबलपोस्टलाई जानकारी दिए ।
उक्त गीतको शब्द पछील्लो समयका गायक,मोडल एबम शब्द संकलक नन्दु परियारले लेखेका छन भने लय दिएका छन नारायण र नन्दुले । त्यस्तै मोडलिङ करिष्मा र नन्दुको रहेको छ । सम्पादन मनोज कार्की छायांकन करन चैसिर र निर्देशन मदन खड्काको रहेको जोबानलाई बुलबुल नेट्वर्कले बजारमा ल्याएको छ ।